Akụkọ - Nyocha nke karama iko
Isi njirimara iko nkwakọ containersbụ: ndị na-adịghị egbu egbu, na-atọ ụtọ; Piel, mara mma, ezigbo mgbochi, airtight, ọgaranya na nkịtị ngwaọrụ, ala price, na ike ga-eji ugboro ugboro. Ọ nwere uru nke iguzogide okpomọkụ, nrụgide nrụgide na nhicha nhicha. Enwere ike igba ogwu na oke okpomọkụ ma chekwaa na obere okpomọkụ. N'ihi ọtụtụ uru ọ bara, ọ bụrụla ihe eji eme ihe maka biya, tii mkpụrụ osisi, jujube juice na ọtụtụ ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ. A na-eji iko gbajiri agbaji, soda ash, sodium nitrate, barium carbonate, ájá quartz na ihe karịrị ụdị ihe iri. A na-eme ha site na-agbaze ma na-akpụzi na 1600 ℃.
Karama enwere ike ịmepụta ụdị dị iche iche dịka ebu dị iche iche, ọkachasị gụnyere karama mmanya dị iche iche, karama mmanya, karama pịkụl, karama mmanụ a ,ụ, nwere ike isi karama, karama mmiri, karama ihe ọ carbonụ carbonụ mmanya, kọfị kọfị, iko tii, 0.5kg / 2.5kg / 4kg ite mmanya, wdg. Iko karama ahụ bụ ikuku na uzo, ma nwee ike idobe ngwaahịa ahụ nke nwere ike iru mmiri nke ukwuu ogologo oge.
N'ihi usoro mmepụta iko dị iche iche, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa iko niile ga-ewepụta otu iko agbajiri agbaji na usoro nke imepụta na nhazi. Ewepụghị iko na ụlọ ihe ụlọ ọrụ dị mfe egweri n'ihi na nke nnukwu mmepụta na otu ngwaahịa. Ọnụ ọgụgụ imegharị ihe ugbu a dịkwa oke. Otú ọ dị, ngwaahịa ndị a na-a glassụ iko na ihe ndị na-eme ka iko na ụlọ ọrụ ọkụ nwere ụdị dị iche iche na mmepụta dị ala, ya mere usoro imegharị ihe dị mgbagwoju anya. Glass mebiri emebi bara ọgaranya na adịghị ọcha nke ewepụtara na usoro ịgbaze nke iko, yabụ ọ nwere ike imetụta arụmọrụ nke iko ahụ n'onwe ya.